घाँटी हेरेर हाड निल्न धेरैले बिर्सिए.. | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← हेलिकोप्टर भाडामा लिएर समाजसेवी शाहीद्वारा राहत वितरण
साउदीको जेलबाट एक सय ४ जना नेपाली छुट्न सफल →
भड्किलोपन होइन, सम्पन्नता बढेको हो । शहरमा आफ्नो सम्पन्नता देखाउने चहलपहल बढेको छ । आम्दानी भएर लगानी र उद्यमशीलता नहुँदा यस्तो हुन्छ ।यो महिलामा मात्र होइन, पूरै समाजमा आएको बदलाव हो। पहिलेको तुलनामा मानिसको आम्दानी बढेको छ । राजनीतिक होस् वा साङ्गठनिक रूपले एक अर्कासँगको सम्बन्ध विस्तार भएको छ ।
के कारणले यस्तो भएको हो?
चेतना वृद्धि भएको छ। खर्च गर्नु आफैँमा नाजायज होइन। पैसा हुनेले खर्च गरेन भने बजार विस्तार हुँदैन। बजार भएन भने उद्योग चल्दैनन्, मानिस बेरोजगार हुन्छन्। समाज चल्न खर्च हुनु आवश्यक हुन्छ।
यसमा राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव छ?
छ। राजनीतिक सङ्गठन र अन्य विभिन्न नाममा खुलेका संघ-संस्थाका कारण पनि यस्तो भएको हो। राजनीतिक दललाई भोट चाहिन्छ। त्यसका लागि आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहन जमघट र सम्पर्क बढाउने अवसरहरू चाहिन्छ।
यसलाई नीतिनिर्माण तहले कसरी लिनुपर्छ?
खर्चसँगै बचत गर्ने बानी पनि बसाल्नु पर्छ। बचतबाट लगानी र प्रतिफल आउँछ। त्यसबाट मात्र सम्पन्नता स्थायी हुनसक्छ। तर हामीकहाँ यस्तो हुनसकिरहेको छैन। यसका लागि चेतनाको विस्तार हुनुपर्छ। चीनको बचत ५० प्रतिशतले बढेको छ, नेपालको १५ प्रतिशतमा सीमित छ। कृषि उत्पादन ३० प्रतिशतले घटेको छ। लगानीको वातावरण छैन। पैसा त्यसै खर्च भइरहेको, पूँजी पलायन भइरहेको छ। नीति छ, कार्यान्वयन छैन।
यो अवस्थाले नेपाली समाजलाई कतातिर मोड्ला?
घाँटी हेरेर हाड निल्न धेरैले बिर्सिएका छन्। बचत बिनाको खर्चले समाजलाई उकालो लैजाँदैन।
Posted by: Dambar Rimal Source: Himalkhabar
This entry was posted in अन्तर्वार्ता, धर्म संस्कृती/परम्परा. Bookmark the permalink.